ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - အစားအစာ
စားနပ်ရိက္ခာတို့မိသားစုဘဝနှင့်လူမှုရေး interaction ကအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှကစားခြင်း, မြို့၏သမိုင်းဝင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှသက်သေခံ Carioca ယဉ်ကျေးမှု၏၎င်းပြင်ဆင်များ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်နဲ့ညစာစားကျောက်ပြားကိုမှာ အစားအစာရတနာတစ်ဦးကြွယ်ဝသော, စမ်းသပ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုကြိုဆိုပွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းကကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ငါရီယိုအကောင်းဆုံးသောဟင်းလျာအချို့ကို favelas မှချမ်းသာကြွယ်ဝရပ်ကွက်ကနေ, မြို့အနှံ့စားသောက်ဆိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကိုထုတ်လေ၏ LOVE ။ အဆိုပါသမိုင်းနှင့်အခြေခံ Carioca ဟင်းလျာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မပါဘဲခူးနှင့်အခွင့်ထူးခံအတွင်း Know-ကိုဘယ်လိုနှင့်အကြံပြုချက်များကိုတွဲပြီးတင်ပြကြသည်။
ဇစ်မြစ်, ဓလေ့ထုံးစံ, ယဉ်ကျေးမှု အစားအစာ
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့မြို့ပြ menu ကိုအဓိကအားဖြင့်တမြို့လုံးကိုတစျနိုငျငံလုံးကနေနှင့်လောကီအရာကြွင်းလေထဲကနေယဉ်ကျေးမှုများကိုဆွဲဆောင်နှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ကြမှသာ, ဘရာဇီး၏သမိုင်း၌ကစားသောအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍရဲ့ထုတ်ကုန်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အင်ပါယာနှင့်ရာစုနှစ်များစွာများအတွက်သမ္မတနိုင်ငံ၏တရားဝင်ငွေအရင်းအနှီးခဲ့ပြီနှင့်၎င်း၏တည်ရှိမှုအများစုဘရာဇီး၏ de-facto စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကဲ့သို့သော, မြို့နိုင်ငံရေးသမားများ, သံတမန်များနှင့်အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson တစ်ခုချင်းစီဒေသခံအစားအစာလွှမ်းမိုး, ကွဲပြားခြားနားသောအရသာနှင့် အစားအစာအလိုဆန္ဒများတလျှောက်သို့ဆောင်ခဲ့ကျင်းပခဲ့သည်။
အလားတူပဲ, ကုန်သွယ်ရေးရီယို၏ရလဒ်ကုန်သည်, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ, နိုင်ငံရေးသမားများ, နှင့်ကမ္ဘာနေရာတိုင်းကနေ Voyages တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် - ယနေ့ရီယိုအတွက် အစားအစာ ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုသာ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူခေတ်သစ် Carioca အစားအစာလည်းရှေးခေတ်အာဖရိကန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ရိုးရာအစဉ်အလာဂီအချက်အပြုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူရောနှော, ဌာနေတိုင်းရင်းသားများရာသီနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများဆက်နွယ်။ အဆိုပါရလဒ်သည်သမားရိုးကျချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ခိုင်ခံ့သောဥရောပတိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူအသစ်နှင့်မူထူးခြားတဲ့ဟင်းလျာများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏ကောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဌာနေသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအများအပြားအသီးအနှံ, မျိုးစပါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသီဟိုဠ်, ပီလောပီနံ, Taro, မန်ကျည်း, ချယ်ရီ, စွန်ပလွံ, jaboticaba, jambo ကို၎င်း, sapodilla အဖြစ်အခွံမာသီးလှူဒါန်းခဲ့သည်။ အာဖရိကန်ကိုလိုနီခေတ်ဘရာဇီးမှာချက်ပြုတ်တာဝန်ခံရှိကြ၏, သူတို့ကပဲမျိုးစုံအများဆုံးပုံမှန်အမျိုးသားရေးဟင်းလျာများ, cayenne, သံလွင်ဆီ-သည်စွန်ပလွံ, ခြောက်ပုဇွန်, yams, ရုံးပတီနှင့်အနံ့အရသာအတွက်အသုံးပြုအမျိုးမျိုးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစတင်မိတ်ဆက် - ဤမူရင်းအာဖရိကန်ချက်ပြုတ်နည်းများတချို့ရှိနေပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောနေဆဲ Zumbi dos Palmares နေ့ကအရေးကြီးဒေသခံအထိမ်းအမှတ်ပွဲ, စဉ်အတွင်းပြင်ဆင်ကြ၏။
Carioca အစားအစာ ပေါ်တူဂီမှအသားနဲ့ပင်လယ်စာဟင်းလျာများ, သုပ်, ဟင်းချို, အချိုပွဲ, နှင့်ခြောက်သွေ့သောသကြားလုံးအဘို့သူ့ရဲ့အခြေခံကိုဥရောပချက်ပြုတ်နည်းများအများစုကိုကြွေးတင်နေသည် - ပေါ်တူဂီပြင်းပြင်းထန်ထန်, အမဲသားတွေနဲ့ဂျုံနဲ့ဆန်စားသုံးမှု, သိုးသငယ်တကောင်, ဝက်သား, ငါး, ဟင်းချို, အသီးအပွရာထူးတိုး နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
ဖြစ်တည်မှု၏မြို့ရဲ့ 450 နှစ်သင်တန်းကိုကျော်, ရီယိုရဲ့ဒေသခံများကဌာနေချက်ပြုတ်ဖို့သူတို့ကိုပြုပြင်ရေးဆွဲပြီး, ထိုကဲ့သို့သော feijoada, ကေ​​ာ့နှင့် Northeastearn ဘရာဇီးကနေအများအပြားအရသာဟင်းလျာများအဖြစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, အာဖရိကနဲ့ဥရောပကနေအရသာနဲ့ texture, ထည့်သွင်း, အံ့သြဖွယ်အချက်အပြုတ်မီးတောက်ဖွံ့ဖြိုးပြီ ထိုကဲ့သို့သော manioc နှင့်အုန်းသီးအဖြစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ။ ပိုပြီးမကြာသေးမီနှစ်များတွင်နိုင်ငံတကာအချက်အပြုတ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးထိုကဲ့သို့သောဂျပန်ဆူရှီ, မက္ကဆီကန် empanadas နှင့်ပြင်သစ်crêpeအဖြစ်အမြစ်ယူကြပြီ။
High-end စမ်းသပ်အစားအစာမှ '' botecos '' အရောင်းရဆုံးနှစ်သိမ့်စားနပ်ရိက္ခာကိုခေါ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်ရွှင်လန်းသောအရက်ဆိုင်, အစဉ်အလာဘရာဇီးပြားထံမှထူးခြားဆန်းပြားသည့်နိုင်ငံတကာအစားအစာမှ, ခပ်သိမ်းသောစိတ်ဓါတ်များနှင့်အာခေါင်ကိုက်ညီမှမြို့အနှံ့စားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်မကြာသေးမီကဘရာဇီးကစီးပွားရေးစန်းပွနောက်ထပ်နိုင်ငံခြားအချက်အပြုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီ, နှင့်၎င်း၏မူရင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနေစဉ်, Carioca အစားအစာ ယခုသိသိသာသာအချို့သိသိသာသာခေတ်မီဆန်းပြားချက်ပြုတ်နည်းများထည့်သွင်းရန်ချဲ့ထွင်လာခဲ့သည်။ ဒီနေ့ရဲ့ အစားအစာ ထိုကဲ့သို့သောရီယိုရဲ့ပွဲတော် အစားအစာo ခြင်း, Degusta ရီယိုနှင့်လောက '' ခေါက်ဆွဲကကွန်ဂရက်၏ hosting အတွက်အဖြစ်နှစ်စဉ်အချက်အပြုတ်ပွဲတော်များနှင့်ပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုး၏ဖန်တီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့ရီယိုအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါပုံကိုရောက်လေပြီ။
ဘရာဇီးအစားအစာယခုကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးတဦးဖြစ်ပြီး, ပုံမှန်ဒေသဆိုင်ရာဟင်းလျာများဘရာဇီးပိုင်နက်တလျှောက်လုံးကိုအလွန်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်နေစဉ်, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ feijoada အတွက် '' leão veloso '' ပုစွန်ဟင်းချိုနှင့်အတူထွက်ရပ်နေ၏။
Feijoada, ဘရာဇီးရဲ့အမျိုးသားရေးပန်းကန်အများဆုံးပုံမှန်အမျိုးသားရေးပန်းကန်၏ status ရောက်ရှိခဲ့သည်နှင့်ဘရာဇီးအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်လူသိများအပြင်ဘက်နှင့်ဘရာဇီးအစားအစာ၏သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
rodizios, churrascarias, ကီလိုနှင့် '' တစ်ဦး-la-လှည်း '- ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်စားသောက်ဆိုင်လေးမျိုးရှိသည်ရှိပါတယ်။ အစားအစာကိုမဆိုအမျိုးအစားပေးထားသော, စားသောက်ဆိုင်၏အသီးအသီးအမျိုးအစားဟင်းလျာများတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ပျော်မွေ့နေသောလမ်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ယူနှင့်အတွေ့အကြုံဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အချိုရည်, ကော်ဖီ, အချိုပွဲများနှင့်များသောအားဖြင့်သီးခြားစီစွဲချက်တင်ကြသည် - Rodizios တစ်ဦး fixed စျေးနှုန်းတရားစွဲဆိုနှင့်န့်အသတ်မရှိ, သင်တန်းများထပ်ဆောင်းစွဲချက်နှင့်အတူစားပွဲ၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြဘယ်မှာအလွန်အမင်းလူကြိုက်များထူထောင်မှုဖြစ်ကြ၏။ Rodizios အမှန်တကယ်ရီယိုအတွက်ချစ်တော်မူကြသည်, ပင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစားသောက်ဆိုင်တစ်ပတ်-ဆုံး rodizios မှ convert နိုင်ပါသည်: တကယ်တော့အများအပြားကောင်းစွာတည်ထောင်ခဲ့သည် High-end စားသောက်ဆိုင်ယခုနေ့လယ်စာနာရီအတွင်း rodizios ကိုဆက်ကပ်။
ပုံမှန် rodizio ဟာယပူဇော်သက္ကာပီဇာ, appetizers, ခေါက်ဆွဲ, နှင့်အသားများပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Ipanema နှင့် Copacabana အဖြစ် touristy ဒေသများရှိဆူရှီ rodizios ယခု ပို. ပို. ရရှိနိုင်ပါသည်။ Rodizios ကအလွန်စျေးနှုန်းသက်သာနဲ့ရိုးရိုးညစာစားပွဲများအတွက်ထံမှအလွန်စျေးကြီးနှင့် posh စားသောက်ဆိုင်အထိနိုင်ပါတယ်။
Churrascarias rodizio အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့အမဲသားကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အတွက်အထူးပြုနှင့်ကြောင့်, သူတို့အစွန်းရောက်လူကြိုက်များ၏ပုံမှန်အားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အတန်းအစားဖြစ်ပါသည် - ဤစားသောက်ဆိုင်စားပွဲထိုးများတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ပွားလာကိုတိုက်ရိုက်ဖောက်သည် '' ပန်းကန်ထဲသို့အမဲသားကိုအမျိုးမျိုးချလိုက်တယ် ။ တစ်ဦးကိုအနီရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်စက္ကူ signal ကိုစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်လာမယ့်ရပ်တန့်ဖို့လည်းကောင်းစားပွဲထိုးအချက်ပြမှ clients များအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။
Churrascarias လည်း clients များထိုကဲ့သို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ခေါက်ဆွဲ, risotto, မုန့်,​​ ဒိန်ခဲ, ချမ်းအေးဖြတ်တောက်မှု, ဟင်းချိုနှင့် condiments အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအပိုဆောင်းဘက်ဟင်းလျာများ Self-အစေခံနိုငျတဲ့ဘူဖေးစားပွဲခုံကိုဆက်ကပ်။ high-end churrascarias ကိုလည်းဘူဖေးစားပွဲပေါ်ငါးနှင့်ဆူရှီတို့ပါဝင်သည် - vegans အဘို့, ကသူတို့အမဲသားကို-မေတ္တာရှင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူလိုက်ပါနှင့်ပဲခြမ်းဟင်းလျာများနှင့်အတူအပြည့်အဝအမဲသားကို-အခမဲ့န့်ညက်ခံစားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ high-end churrascarias ထိုကဲ့သို့သောမျှမအပိုတာဝန်ခံမှာယုန်နဲ့ငှက်ကုလားအုပ်အဖြစ်ကိုအထူးအသား, အစေခံပေမယ့်ဒီဟင်းလျာမီနူးပေါ်မှာရှိနှင့်အထူးသဖြင့်အဘို့တောင်းလျှောက်ခံရဖို့ရှိသည်မပြုစေခြင်းငှါ - အချိုရည်, ကော်ဖီနှင့်အချိုပွဲကို fixed စျေးနှုန်းတွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တွေဟာဘယ်တော့မှနေကြတယ် အဆိုပါသင်တန်းများကို၏စျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယေဘုယျအားစျေးကြီး။
ကီလို clients များအဓိကစားပွဲ၌သူတို့ကိုယ်သူတို့အစေခံပြီးတော့ကိုသူတို့ပြားအလေးချိန်နဲ့အလေးချိန်အားဖြင့်အညီ billed get ဘယ်မှာစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ကြ၏။ ကီလိုမကြာခဏ fixed စျေးနှုန်းမှာန့်အသတ်စားသုံးခြင်းအဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ '' fixo '' နှုန်းကိုပူဇော် - ပုံမှန်အားဖြင့်ဤနှုန်းအတညျ့အလငျးမြင်နိုင်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာမဟုတ်ပါဘူးနှင့် ပတ်သက်. စေ့စေ့မေးမြန်းပြီးရမည်ဖြစ်သည်။ အများစုဟာကီလိုသားတစ်ဦးကောင်းတဲ့အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အဖြစ်ကောင်းစွာအခြေခံ churrascaria ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားဖြတ်တောက်မှုများသောအားဖြင့်အဓိကအစာအာဟာရကိုကျောက်ပြားကိုအနေဖြင့်သီးခြားစီတည်ရှိသောနေကြတယ်, အသားကိုခုတ်ဖြတ်ကြသည်နှင့်အမိန့်မှပြင်ဆင်ကြ၏။
ဒါ့အပြင်သူတို့ဆော်လမွန်သို့မဟုတ် tuna ငါး၏ sashimi ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီအထူးသဖြင့်အဘို့တောင်းလျှောက်ရဦးမည်နှင့်သီးခြားပန်းကန်အပေါ်တွက်ချက်နေကြပြီး, မြင့်မားမှုနှုန်းမှာ billed ကြသည် - high-end ကီလိုကိုလည်းဘူဖေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဆူရှီကိုဆက်ကပ်။
တစ်ဦး-la-လှည်းဟင်းလျာများသတ်မှတ်ထားတဲ့ menu ကနေအမိန့်ပေးနေကြသည်ရှိရာပုံမှန်စားသောက်ဆိုင်များမှာ - ရီယို, ပုံမှန်ဘရာဇီးကနေခေတ်ပြိုင်အာရှအထိဟင်းလျာများ်ထမ်းဆောင်, Fusion, တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် Vegan အတွက်-la-လှည်းစားသောက်ဆိုင်တစ်ကြီးမြတ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
မြို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာတန်းစီသောယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ် '' တစ်ဦး-la-လှည်း '' စားသောက်ဆိုင်ဒေသခံဖန်တီးမှုနောက်ထပ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာအားဖြစ်ကြ၏။ ဂျပန်အစားအစာကိုအစောပိုင်း 20th Century အတွက်ဂျပန်ဝင်လာသူကြီးများဝင်ရောက်လာနှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့နှင့်သူ၏ကတည်​​းက Cariocas အကြားတွင်တစ်ဦးခေတ်မှီ option ကိုဖြစ်လာသည်။
ပြင်သစ်အစားအစာ, အားလုံး၎င်း၏ပုံစံများနှင့်၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုများအများကြီးလည်း ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏လူအနေဖြင့်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်လက်နက်နှင့်အတူနှုတ်ဆက်ပြီးမှသိရသည်။ Crêpeစားသောက်ဆိုင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း, အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်အစားအစာ Leblon နှင့် Copacabana အတွက်ဆက်၌တွေ့နိုင်ပါသည်။
အများစုကစားသောက်ဆိုင်အင်ကာမူရင်းကြည်နူးဖွယ်ပီရူးစားနပ်ရိက္ခာ်ထမ်းဆောင်, ဘရာဇီးဝှမ်းမှဟင်းလျာများနှင့်အရသာကို ပူဇော်. , အဖြစ်ကျယ်ပြန့်တောင်အမေရိက။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့စတိုင်နှင့်တီထွင်သက်သတ်လွတ်နှင့် vegan စားသောက်ဆိုင်၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာကတခြားအချက်အပြုတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမွေးစားလိုက်ပါတယ်။
အစားအစာနှင့်ဂီတများအတွက် Cariocas '' ကြီးမြတ်ဆှဖှေဲ့နှင့်ချစ်ခင်၏ပြည့်အဝတန်ဖိုးထားအတွက်, ရီယိုအတွက်အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်အများအားသူတို့စားသကဲ့သို့အသက်ရှင်သောဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူဖောက်သည်များပေးအပ်ခြင်း, နှစ်ဦးကို intertwine ။ ထိုကဲ့သို့သော Lapa အဖြစ်ရပ်ကွက်၏လမ်းများတန်းစီသောအရက်ဆိုင်များနှင့်ကလပ်များအတော်များများဟာစိတ်ကိုဖမ်းစား Samba တွဲပြီးအစဉ်အလာကိုပြသ menus တွေနှင့်အတူဆက်ကပ်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်, လောကီသားတို့သည်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုများအချက်အပြုတ်တစ်ဦးထူးခြားကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ် Carioca menu ကိုဖန်တီးခြင်း, တစ်ဦးပျြောလှည့်ကွက်နှင့်အတူရာတွက်ကြသည်။
ခေါ်တော် '' Feijoada '' အဆိုပါဘရာဇီးအမျိုးသားရေးပန်းကန်တဆယ်ဝက်သားနဲ့ဝက်အူချောင်းဖြတ်တောက်မှု၏အမျိုးပေါင်းအဖြစ် optional ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များအထိ်တစ်ဦးကအနက်ရောင် bean ကိုစွပ်ပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကသမိုင်းပညာရှင်ကြောင့်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့၏ထိုအချိန်ကတောင်ပိုင်းဥရောပတိုက်တွင်လောင်သစွပ်ပြုတ်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါပဲမျိုးစုံနှင့်အသား, နာရီများအတွက် stewed, ကြွယ်ဝသောရွန်းလဲ့နဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြို့အနှံ့စားသောက်ဆိုင်ကဤခဲဖွယ်စားဖွယ်ဘရာဇီး၏အလွန်အကောင်းဆုံးသောနမူနာထုတ်လုပ်ရန်ယှဉ်ပြိုင်။
'' churrasco '' ဟုခေါ်တွင်နာမည်ကြီးဘရာဇီးသားကင်တစ်ရှေ့ဆောင်ကျွဲနွားလယ်သမားကြမ်းကိုဆားသဖြင့်သီးသန့် seasoned တစ်ဦးကိုမီးကျော်ကသစ်သား skewers ပေါ်မှာကင်အမဲသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခါ, Sul ပြုပါ Rio Grande ၏ဘရာဇီးပြည်နယ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အကင်ဆိုင်တွေကိုမကြာခဏနေအိမ်များအတွက်ဧည့်ခံကြသည်နေစဉ်, ကင်အမဲသားကိုစားသောက်ဆိုင်အမှန်တကယ်ရီယိုဟာသူ့ရဲ့ကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ အရည်ရွှမ်းအမဲသားကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၏အစဉ်အမြဲစမ်းချောင်း, ဖောက်သည်များ '' ကျောက်ပြားကိုမှဆောင်ခဲ့ကြ၏နှင့်သူတို့၏မျက်စိ၌မထင်လိုက်သည်, ဘက်စလောင်းများ, သုပ်, pastries တစ်ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်းအားဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည် - ကို 'rodízio' (အလှည့်) စနစ် Churrascarias ကသူတို့ရဲ့မူထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်နှင့်အယူခံဝင်ချေးကားအဘယ်သို့ နှင့်ဆူရှီ။
ပျေါတူဂီပထမဆုံးအစောပိုင်း 20th Century ဘရာဇီးမှကြက်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံအတွင်းအစောပိုင်းတွင် aviculture '' တောကြက်သား '' ဆိုလိုတာက '' frango caipira '' အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဘရာဇီးကိုကမ္ဘာ့ကြက်သား, အမဲသား၏အကြီးဆုံး exporteres တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်ရီယိုကိုဖြတ်ပြီး, တ Cariocas ကောင်းစွာ-ကိုလညျးတတျကြှမျးကြက်သားစားဖိုမှူးနှင့်စားသုံးသူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖြည့်စွက်၏အနုပညာပြည့်စုံပြီ, အဖြစ်ကျွမ်းကျင်စွာကင်ဖြတ်တောက်မှုအထောက်အထားရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အရက်ဆိုင်နှင့်စျေးဆိုင်အတိတ် Walking, နေထိုင်သူများနှင့်ဧည့်သည်များမှန်မှန်တံ-လှော်တပြင်လုံးကိုကြက်၏ချမ်းသာ tantalizing အနံ့အားဖြင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရှည်လျားငါးဖမ်းသမိုင်းနှင့်တစ်ကြိမ်မှာအားလုံးပြည်နယ်များအမြင့်ဆုံးငါးဖမ်းအထွက်နှုန်း၏ခေါင်းစဉ်ကျင်းပခဲ့တယ်။ '' Bacalhau '', ဒါမှမဟုတ်ကော့ဒ်, ဘရာဇီးအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသောငါးသည်, နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယခုနာမည်ကြီးခရစ္စမတ်မှာပျော်မွေ့နေတဲ့နူးညံ့ရယူနိုင်ပါတယ်အမျိုးသားရေးပန်းကန်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ Bacalhau အစောပိုင်း 19 ရာစုအတွက်ပေါ်တူဂီတရားရုံးကဘရာဇီးစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ပင်လယ်စာအစားအစာများအနေနဲ့အထင်ကြီးသူအရေအတွက်ဟာဘရာဇီး၏အရှေ့မြောက်မှလာကြ၏။ '' Moqueca က de Peixe '' Bahia အတွက်ဌာနေတိုင်းရင်းသားအမျိုးအနွယ်ထံမှအစပြုတဲ့ငါးစွပ်ပြုတ်, အစဉ်အလာအုန်းသီးနို့, ဆီအုန်းနှင့်ငါး၏ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူမြေအိုးထဲမှာချက်ပြုတ်နေသည်။ '' Acarajé '' အတန်ငယ်ထို့နောက်ဖြတ်သော falafel, တူ, ပထမဦးဆုံးအဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်ဘောလုံးကိုသို့လှိမ့်နေကြပါတယ် 1916 ခုနှစ် Bahia တှငျမှတျတမျးတငျထားသတဲ့အံ့သြဖွယ်တမူထူးခြားတဲ့အာဖရိကန်-ဘရာဇီးရိုးရာအကအနက်ရောင်မျက်လုံးများနှင့်ပဲမျိုးစုံ၏ဖန်ဆင်းပန်းကန်, ကြက်သွန်, ဆား, ဆီအုန်းဖြစ်ပါတယ် ဝက်အတွင်းနှင့် pigweed, ပေါင်းပုစွန်, ငရုတ်ကောင်းနှင့်သုပ်တဲ့အဆာနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Cariocas မွို့ထဲမှာနီးပါးရှိသမျှ bar မှာ, စားသောက်ဆိုင်နှင့်အိမျ၌တှေ့ရနိုငျသောသူတို့၏အ pasteis, သကြားလုံးများနှင့်မုန့်များ, ကိုးကွယ်။ သူတို့ဟာ favelas ၏အပေါ်ဆုံးမှာသေးငယ်တဲ့ဆိုင်တွေထဲကနေ, posh ခရိုင် Leblon အတွက်ခေတ်မီဆန်းပြားရှမ်ပိန်ညစာစားပွဲမှပဲနှင့် ပတ်သက်. လူတိုင်း၏ကျောက်ပြားမှာကိုစားကြသည်။ ဘရာဇီး savory pastries အရှိဆုံးချစ်ရာသခင်၏တစ်ခုမှာမုန့်-အစအနအတွက် coated ကို 'coxinha' 'တစ်ဦးမျက်ရည်တစ်စက်-shaped, ကြက်သား-ပြည့်ဝပျော့ pastry သည်နှောင်းပိုင်း 19 ရာစုအတွက်ဆောပိုလိုကနေရှိကြတယ်လို့ဖို့ကဆိုသည်။ ထို coxinha နှင့်အတူနားမှာဘက်ခြမ်းကိုတကအမြဲတမ်း '' Pasteis '', သို့မဟုတ် pastries ၏ကျယ်ပြန့်ဌန်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအသုံးအများဆုံးဒိန်ခဲ, ဝက်ပေါင်ခြောက်, minced သားနဲ့ပုစွန်အပါအဝင်စဉ်အလာနှင့်ခေတ်ပြိုင်နှစ်ခုလုံးကိုဖြည့်အတူပြည့်ရကြ၏။
'' Brigadeiro '' ချိုမြိန်ကို archetypal ဘရာဇီးဖြစ်ပါသည် - ရှိသမျှပါတီနှင့် Cariocas '' ဗီရိုထဲမှာလူကြိုက်များအားရစရာမှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဧည့်သည်။ ဒါဟာဖြန်းအတွက် coated, နို့ဆီနို့, ချောကလက်နဲ့ထောပတ်၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ပျော့ပျောင်းနှင့်အလိုလိုကျ truffles ဖြစ်ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. , '' ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း '' ကိုဆိုလိုသည်, 1946 မေဆွိနှင့် savory မုန်အတွက်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတထွက်ပြေးတဲ့သူဗိုလ်မှူးချုပ်ဒို Gomes တစ်အခွန်ဆက်အဖြစ်နည်းလမ်းများစွာအတွက်ဘရာဇီး Ian အစားအစာ၏အဓိကနှင့် Cariocas နှင့် ပတ်သက်. အလွန်ကြီးစွာသောမာနထောင်လွှားသောအရာတစ်ခုခုခံစားမိကြသည်။
သံပုရာ, စိတ်ပျက်ရေခဲသကြားနှင့်လုပ်သောဂုဏ်ပြုဘရာဇီးကော့တေး '' cachaça '' တစ်ဦးကြံဝိညာဉ်တော်သည် - ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့လာရောက်လည်ပတ်မည်သူမဆိုတစ်ဦး tantalizing '' caipirinha '' ကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြလိမ့်မည်။ ဂန္ထဝင်အပေါ်အရသာလိမ်မယ့်အစားမယ့်အစားသံပုရာ၏cachaçaနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုအသီး, ကီဝီသို့မဟုတ်သရက်သီး၏ဗော့ဒ်ကာကို အသုံးပြု. လည်းရှိပါတယ်။
ဘရာဇီးရဲ့အသီးဟာယပူဇော်သက္ကာကိုကျော်ငှက်ကလေးဆုံးနှင့်အရည်ရွှမ်းကမ္ဘာ၏အချို့ဖြစ်ကြ၏။ အစဉ်အလာလိမ္မော်သီးနှင့်ပန်းသီးကနေ, မာလကာ, သင်္ဘောသီး, သရက်သီးနှင့် jackfruit ၏ပိုပြီးအပူပိုင်း options ကိုမှ: 'sucos' 'ဟုခေါ်တွင်, ရီယိုအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်လောလောလတ်လတ်ဖန်ဆင်းတော်အသီးဖျော်ရည်၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အသီးဖျော်ရည် Carioca အစားအသောက်နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့တစ်ဦးသည်အလွန်ရေပန်းစား component တစ်ခုရှိပါတယ်။ အုန်းသီးကိုရေရီယိုရဲ့နေထိုင်သူများ၏ Darling သည်, မည်သည့်ကမ်းရိုးတန်း kiosk သို့မဟုတ်လမ်းပေါ်ကရောင်းချသူထံမှဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
စတော်ဘယ်ရီနှင့်ပျားရည်, ငှက်ပျော, မကြာခဏချိုမြိန်နှင့် crunchy granola နှင့်အတူဖြန်း - '' Açaí '' ဖျော်ရည်, smoothi​​es နှင့် sorbets အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ, တစ်အရေအတွက်တို့ကိုလောင်လိမ့်နိုငျသောဂုဏ်ပြုအပူပိုင်း '' စူပါအစားအစာကို '' ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမနေပါစေစားနပ်ရိက္ခာသို့မဟုတ်အခါသမယ, ဘီယာနောက်ကျော 17 ရာစုမှ၎င်း၏စားသုံးမှုနေ့စွဲ၏ရှိရာပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းများအချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ရီယိုအတွက်မှတ်တိုင်ကိုသောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာအားလုံးကြီးမားတဲ့လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များ, လမ်းပေါ်ကပါတီများနှင့် buzzing ရင်ပြင်, လမ်းပေါ်ကစျေးသည်များကြီးတွေ, ခရီးဆောင်ရေခဲသေတ္တာများနှင့်ဒေသခံများထံမှသံဗူးနှင့်ပုလင်းကိုရောင်းချဆိုလိုတာပါ။ အစဉ်အလာ, ဘီယာ၏လုပ်အရေးကြီးသကဲ့သို့, ယင်း၏ temperaure သည်: ကိုအေးပိုကောင်း!
I LOVE RIO သူတို့ရင်းမြစ်မှရသည့်နိုင်ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးအရည်အချင်း Carioca စားဖိုမှူးများ၏ finesse သူတို့နှင့်အတူပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုရှိရာလိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အားလုံးအပါအဝင်အကောင်းဆုံးသောချက်ပြုတ်နည်းများ, အချို့ကိုပေးစွမ်းသည်။
အဖြစ်ကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သော feijoada နှင့် savory pastries အဖြစ်အစဉ်အလာအစားအစာသကဲ့သို့, ငါရီယို LOVE ဘရာဇီးကိုမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းပြည်နယ်များအနေဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းသောအရသာချက်ပြုတ်နည်းများအချို့ကိုအဖြစ်ချိုမြိန်ရယူထားသောနှင့် hidden Carioca အချက်အပြုတ်ကျောက်မျက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့နောက်ထပ် afield ဝင် ။